Tiyaatarka Masar | Safarka Absolut
Daniel | | Masar
Markii aan ka fikirno Masar maskaxdeena waxaa isla markiiba ka buuxa sawirada ugu caansan ee dalka, iyadoo lagu soo rogayo sawirka Ahraamta asalka. Si kastaba ha noqotee, dhaqanka ka jira dalkan qadiimiga ah ee xiisaha leh wuxuu leeyahay muujiyo kale oo badan. Mid ka mid ah ayaa ah tiyaatarka Masar.
Masraxa Qadiimiga ah ayaa Masar uga yimid Gariigta xilligii muddada hellenistic (inta udhaxeysa qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad BC). Wadanka Niil muuqaalkan farshaxanimo wuxuu ku xirnaa cibaado diimeed iyo ciidaha qaarkood sida cibaado ee Osiris, oo lagu soo bandhigay bandhigyo iyo bandhigyo socday dhowr maalmood.
Si kastaba ha noqotee, dhaqankii masraxa ee dhulalka Masar ayaa la waayey xilligii qarniyadii dhexe oo dib looma dhalan ilaa bartamihii qarnigii XNUMXaad. Marka hore mahadsanid saameynta Faransiiska iyo tan Ingiriiska.
1 Dhalashadii tiyaatarka casriga ah ee Masar
2 Tiyaatarada waaweyn ee Masar
3 Qaahira Tiyaatarka Tijaabada
Dhalashadii tiyaatarka casriga ah ee Masar
Waxqabadka masraxa ee asalka Yurub ayaa saameyn ku yeeshay dhalashada iyo isbadalka tiyaatarka carabta casriga ah kaas oo ka bilaabmay horu marka Masar. Sannadahaas kuwii ugu horreeyay ee riwaayadaha qora ee reer Masar ayaa u muuqday sidii Axmed Shawqi, kaas oo la jaan-qaaday majaajilooyin hore oo caan ah oo dalka laga keenay. La qabsigaasi ma lahayn wax is yeelyeel ka weyn kan madadaalada dadweynaha Carbeed, iyada oo aan maamulladii gumaysiga Ingiriisku fiiro yar siin iyaga.
Tawfik al-Hakim, "aabaha" masraxa casriga ah ee Masar
Si kastaba ha noqotee, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay Tawfiiq al-Hakim (1898-1987) runtii aabihii masraxa casriga ah ee Masar, tobankii sano ee 20-naadkii qarnigii la soo dhaafay. Sannadahaas, qoraagan wuxuu soo saaray illaa konton riwaayad oo ah noocyada ugu kala duwan. Maanta shaqadiisa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid duugoobay, laakiin wali waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay shaqsi fure u ah masraxa Masar.
Tirada kale ee weyn ee tiyaatarka ku taal dalka Niil ayaa ah Yusuf idris (1927-1991), qoraa iyo riwaayad qoraa leh nolol kacsan oo ay ka buuxaan safarro iyo isku dhacyo shaqsiyadeed oo ka dhashay dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. Wuxuu galay xabsiga in ka badan hal jeer qaar ka mid ah shaqooyinkiisana waxaa mamnuucay maamulkii kaligii taliska ahaa ee Nasser. Waxaa sidoo kale lagu qasbay inuu dalka ka baxo muddo gaaban, isaga oo ka cararaya cadaadiska.
Farshaxanka, wuxuu ku guuleystey inuu casriyeeyo tiyaatarka Carabiga labadaba mowduucyada shaqadiisa iyo luqada lagu adeegto. Jaantuskiisa inta badan waxaa lala barbardhigaa kan qoraha Qaahira caanka ah Naghib Mahfuz. Isaga oo kale, Idiris sidoo kale waxaa loo sharaxay abaalmarinta Nobel Prize, in kasta oo kiiskiisa uusan helin abaalmarin intaas la eg oo la sugayay, oo uu ku haray irdaha.
Ka mid ah qorayaasha ugu casrisan waa lagama maarmaan in la muujiyo haweeney: Safaa fathy, qoraaga shaqada caanka ah Ordalie / Terreur. Fathy waxay ku soo kordhisay adduunka tiyaatarka, Fathy waxay u istaagtay qoraa iyo filim sameeye, isla waqtigaasna waxay daabacday qoraalo dhowr ah oo dabeecad falsafad leh. Sida kuwa kale oo badan oo indheer garad ah oo Masaari ah, waxaa lagu qasbay inay dalka ka baxdo. Waxay hada ku nooshahay faransiiska halkaas oo ay si cad ugu cambaareysay marar badan xaalada haweenka aduunka islaamka.
Tiyaatarada waaweyn ee Masar
Muddo tobanaan sano ah goobta ay ahayd tixraaca weyn ee tiyaatarka Masar waxay ahayd Opera Khedivialin Qaahira, tiyaatarka ugu da'da weyn Afrika, oo la dhisay 1869. Sannado ka dib, 1921, astaan ​​aan yareyn Alexandria Opera House (hada la yiraahdo Tiyaatarka Sayid Darwiish), xoogaa ka xishood badan dhinacyada.
Gurigii quruxda badnaa ee Qaahira Opera
Nasiib darrose, dhismihii quruxda badnaa ee Khedivial Opera waxaa gabi ahaanba dabku baabi'iyay 1971.
Caasimada Masar maysan lahayn masrax masraxa ilaa 1988, markaas oo Qaahira Opera. Dhismahan cajiibka ah wuxuu ku yaalaa Jasiiradda Gezira, oo ku taal Webiga Niil, gudaha xaafadda Zamalek. Sidoo kale waa qayb ka mid ah dhismayaasha waaweyn, Xarunta Dhaqanka Qaranka ee Qaahira waxayna leedahay lix tiyaatar, mid ka mid ah hawo furan oo leh awood 1.200 oo daawadayaal ah.
Qaahira Tiyaatarka Tijaabada
Qaahira Opera House waxaa lagu qabtaa sanad walba Bandhig Tiyaatarka Tijaabada ah, mid ka mid ah dhacdooyinka dhaqameed ee ugu muhiimsan dalka iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe.
Qoraal loogu talagalay daabacaadda 2018 ee bandhigga Masraxa Tijaabada Qaahira
Bandhiggan waxaa loo dabaaldegaa bisha Sebtember wuxuuna socdaa 10 maalmood. Dhexdeeda, riwaayado caan ah oo isugu jira muwaaddiniin iyo ajnabi iyo shirkado masrax ayaa la siiyaa ballamo. Dhammaantood waxay ka kooban yihiin boodhadh kala duwan oo midabbo leh oo dhawr bandhig maalinle ah lagu soo bandhigayo xaafadaha kala duwan ee tiyaatarka.
Jilayaasha, farshaxanada qurxinta, muusikiistayaasha, maareeyayaasha dharka, agaasimayaasha iyo qoraalada riwaayadaha ee lagu abaal mariyay Tiyaatarka Tijaabada tijaabada ee Qaahira waxaa la siiyay taallo xiise leh oo soo saareysa muuqaalka Thot in waagii hore ee Masar loo tixgaliyay, waxyaabo kale, ilaaha farshaxanka. Sawirka hogaaminaya boostada wuxuu u dhigmaa gala xiritaanka xafladan qaybtiisa 2018.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tiyaatarka Masar
Ku sugnaaw Masar laga bilaabo Sebtember 15 illaa 28 Waxaan rabaa in aan wax ka ogaado riwaayadaha soo socda, shirkadaha tiyaatarka, aqoon isweydaarsiyada farshaxanka ah, puppets, masks ... mahadsanid
Ku jawaab bren